हार्दिक बधाई नायिका साम्राज्ञी र जितु नेपाल विवाह गर्दै, के हो वास्तविकता ? – Sandesh Press
हार्दिक बधाई नायिका साम्राज्ञी र जितु नेपाल विवाह गर्दै, के हो वास्तविकता ?
December 28, 2021 139
नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहले लण्डनमा बसोबास गर्दै आएका कपिल रिजालको निर्देशनमा बन्न लागेको अनटाइटल प्रोजेक्टमा साइन गरेकी हुन् । यो चलचित्रमा साम्राज्ञीको जोडीको रुपमा कलाकार !
जितु नेपालले काम गर्नेछन् । दुबै कलाकारले चलचित्रका लागि लिखित संझौता गरिसकेका छन् ।***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *
मामा मलाई नमार्नु भूपेन्द्र बडुवालले हात जोड्दै वि न्ती गरेका थिए । तर, कैलालीका ग्या ङस्टर नन्दु भनिने नवीन रावलले छाडेनन् । खुकु रीको धा रले नाता भन्दैन भाञ्जा’ भन्दै नन्दुले लखेट्दै प्र हार गरेका थिए ।
प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार २३ कात्तिकको साँझ ९ बजे भूपेन्द्र माथि खुकुरी सहित नवीन रावलको समूहले आक्रमण गरेको थियो । नाताले नवीन रावल भूपेन्द्र बडुवालका मामा पर्छन् । टाढाको नाताले उनीहरुबीच चिनजान पनि थियो । तर, योज नाव द्ध तरिकाले डाकेर भूपेन्द्रको ह त्या भएको थियो ।
भूपेन्द्रलाई आफ्नै साथी कपिल श्रेष्ठले पेट्रोलको बहानामा डाकेका थिए । दिपेश न्यौपानेलाई लिएर सुरुमा केराबारीमा पुगेका थिए । तर, असु रक्षित ठा नेर फर्कि एका थिए ।उनलाई देखेर नवीन रावलको समूहले पि छा गरेको थियो । पछि जमरापुल सिद्धार्थ होटल नजिक रोकेका थिए । उनीमाथि आक्र मणको यो जना !
पहिल्यै बुनि एको थियो । जमरापुलमा पुगेपछि नवीन रावलको समूहले कुरा गर्ने भन्दै रोकेका थिए । सिद्धार्थ होटल नजिकै भूपेन्द्रको आफन्तको घर पनि थियो । त्यहीं कुरा गर्दा गर्दै नवीनले खु कुरी निकालेका थिए । नवीन रावलसहित उनको समूहले छातिको खा गर्दन लगायतका भागमा खु कुरी प्र हार गर्यो । ह त्या नै गर्ने गरी आक्र मण गरेर उक्त समूह फ रार भयो ।
Prevकपडा नहुँदा अगेनाको छेउमा रात कटाउँछ दशरथ चेपाङको परिवार
Nextजब ८ कक्षा मात्र पढेका श्रीमानले डिग्री पढेको श्रीमतीलाई बनाए सोच्नै न सक्ने हालत